လက်အုပ်ချီရန် မလိုအပ်ပါ ဆိုတဲ့ ဖတ်သ်ဝါ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးမျိုးညွန့်လက်ထက် သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ဦးအံ့မောင်က သက်သေအဖြစ် လက်မှတ်ထိုးထား | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မျိုးချစ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မဆင်မခြင် လက်အုပ်မချီပါနှင့်
Malaysian Foreign Minister Anifah: Solve Rohingya issue Asean way »
လက်အုပ်ချီရန် မလိုအပ်ပါ ဆိုတဲ့ ဖတ်သ်ဝါ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးမျိုးညွန့်လက်ထက် သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ဦးအံ့မောင်က သက်သေအဖြစ် လက်မှတ်ထိုးထား
MY FRIEND SENT THIS GOOD RECORD.
၁၉၉၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးမျိုးညွန့်လက်ထက် သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ဦးအံ့မောင်က ဘာသာရေး အဖွဲ့အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီး ကျောင်းသားတွေကိုလက်အုပ်ချီ နှုတ်ဆက်ခြင်းပြုခိုင်းတဲ့အမိန့် ထုတ်ပေးဖို့ အဲလိုလုပ်ပိုင်ကြောင်း ဓမ္မသတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
အဖွဲ့အသီးသီးက ခေါင်းဆောင်များကလည်း တညီတညွတ်ထဲပဲ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လက်ပိုက်ခြင်း salute ပြုခြင်းတို့ဖြင့် အရိုအသေပြုပိုင်ကြောင်း ဒါပေမယ့် လက်အုပ်ချီဖို့ မသင့်ကြောင်း လုပ်ရန်မလိုကြောင်း လက်မှတ်ထိုး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဦးအံ့မောင်က သက်သေအဖြစ် လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်။
အရင်ကတော့ ကျောင်းတွေကို အဲဒီစာ လက်ခံ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ အများစုလက်ထဲ မရှိလောက်တော့ပါဘူး။
ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်ရည် အနေနဲ့ လုက်အုပ်ချီတာ ရှစ်ရ်က် မဖြစ်ဘူး ခံယူထားပါတယ်
ကျောင်းတွေအပါအဝင် နေရာအသီးသီးမှာ By force နဲ့ လက်အုပ်ချီခိုင်းတဲ့ အနေအထားကို မလိုလားတာလည်း အမှန်ပဲ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်မ် ကျောင်းသားများသည် ဆရာဆရာမများ အပါအဝင် ရိုသေထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုရာမှာ လက်ပိုက်လျက်ဖြစ်စေ salute ပုံစံ လက်မြောက်လျက်ဖြစ်စေ အရိုအသေ ပေးနိုင်သည်. လက်အုပ်ချီရန် မလိုအပ်ပါ ဆိုတဲ့ ဖတ်သ်ဝါပါ။
အဖွဲ့တိုင်းက တညီထဲ ဆုံးဖြတ်ထားတာပါ။
ပိုင်မပိုင်နဲ့ ကြည့်ရင် ပိုင်ပါတယ် ဆိုရမှာပါ။
ယိုးဒယားမှာ … မလေးအင်ဒိုမှာ … အိန္ဒိယမှာ လက်အုပ်ချီတာက အရိုအသေ ပေးတဲ့ ပုံစံသက်သက်ပါ။ ဒီမှာက အဲဒီ အဆင့်ထက် ပိုနေပါတယ်။ လုပ်လိုသူကို မကန့်ကွက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အများအတွက် ဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမယ် ဆိုလို့ မရနိုင်ပါ။
လက်အုပ်မချီခြင်းကြောင်း ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ ပြသနာ ရှာတာတွေ တကယ် ရှိခဲ့ပါတယ်။
နည်းစပ်ရာ ဆရာဆရာမများလက်ထဲ ရှိသင့်တဲ့ ဓမ္မသတ်ပါ။
လိုတဲ့နေရာ သုံးနေအောင် ပြန် share ပေးတာပါ။
အပြင်မှာ ပြန် ဖြန့်ရင် ကျွန်တော့်နာမည် credit ပေးစရာ မလိုပါခင်ဗျား။
This entry was posted on April 24, 2015 at 4:56 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.